Mahazo tranonkala tranonkala fifamoivoizana Mety hampahory indrindra indrindra rehefa tsapanao fa efa leo ny loharanonao rehetra izao. Na azonao atao ny mividy ny fivezivezena amin'ny tranonkala kendrena raha te hahavita hahomby amin'ny zavatra hafa ny hafa.
fividianana fifamoivoizana kendrena mety ho safidy mety indrindra amin'ny voalohany hanao tsindry tranokala manokana raha manana fitaovana manintona sy sahaza azy izy io ary mila fampandrenesana mivantana fotsiny mba hanana fiandohana mahatahotra. Misy mpamatsy fifamoivoizana kendrena isan-karazany izay ho hitanao haingana amin'ny Internet ary afaka mampiasa tetika isan-karazany amin'ny tahan'ny teti-bola.
Ankoatry ny fahazoana mpitsidika manana fahafaha-manao lehibe hivadika ho fiovam-po, ny fifamoivoizana kendrenao dia mampitombo ny kalitaon'ny tranokalao koa manatsara ny motera fikarohana ambony. Tsy maintsy manomboka mahazo fivezivezena kendrena aloha ianao - fomba iray amin'izany ny fividianana fifamoivoizana kendrena amin'ireo banky fifamoivoizana hajaina.
Ny fifamoivoizana kendrena dia mampitombo ny fahefanao amin'ny lohahevitra manokana. Izahay dia tsy miresaka momba ny fahefan'ny motera fikarohana an-tserasera na izany aza mikasika ny lafiny izay misy ao amin'ny mpamaky tranokala. Raha toa ny tranokalanao dia tranokala famandrihana izay mampiseho marina ny mombamomba ny mpitsidika tranokala, ireo izay mahita ny tranonkalanao dia mety hihevitra anao ho tranonkala mety indrindra amin'ny tsenanao hatramin'ny fampahalalana momba ny fifamoivoizana (izay antenaina ho tokana ho an'ny tsena).
Ny fifamoivoizana kendrena azonao dia azo ampiasaina hanatanterahana marketing miaraka. Azo antoka fa hahita ny sasany izay afaka manampy anao amin'ny fandoavana ny fivezivezena kendrena ianao na mety hahazo karama malala-tanana kokoa aza noho ny fampifandraisana amin'ny mpiara-miasa (izany hoe amin'ny famoahana na famoahana doka ho an'ny tranonkala hafa).
Ny fahombiazan'ny tranokala iray dia tsy miankina tanteraka amin'ny hoe mividy na mahazo mahita fivezivezena amin'ny Internet lasibatra ianao. Ny fividianana fifamoivoizana kendrena dia ny fandinihana fotsiny.
Na azonao atao ny mividy ny fivezivezena amin'ny tranonkala kendrena raha te hahavita hahomby amin'ny zavatra hafa ny hafa.
Ny fividianana fifamoivoizana kendrena dia mety ho safidy tsara indrindra amin'ny voalohany amin'ny fanaovana tsindry tranokala raha toa ka manana fitaovana manintona sy mifandraika ary mila fampandrenesana mivantana fotsiny mba hanombohana tena tsara. Tsy maintsy manomboka mahazo fivezivezena kendrena haingana araka izay azo atao– fomba iray amin'izany ny fividianana fifamoivoizana kendrena amin'ireo banky fifamoivoizana azo antoka.
VAKIO IZANY Sarotra takarina ve ireo maodely Wordpress?
Ny fifamoivoizana kendrena azonao dia azo ampiasaina hanatanterahana marketing miaraka. Ny fahombiazan'ny tranonkala iray dia tsy miankina tanteraka amin'ny hoe mividy na mahazo gos amin'ny fivezivezena amin'ny tranonkala kendrena ianao.